Ahoana no fomba handoavana saka | Noti saka
Ahoana no fomba handoavana saka
Placeholder sary Laura Torres | | Cheats
Liana fatratra ireo saka malalantsika ka indraindray izy ireo dia afaka mametraka zavatra ao am-bavany izay tsy mifanentana tanteraka amin'izy ireo. Afaka mitelina izay zavatra hitany fa mahafinaritra izy ireo, na amin'ny fanodikodinana ny filalaovana "fihazana".
Mazava ho azy fa tsy ny akora na zavatra rehetra hitan'ny totohondrintsika no tsy azo hanina ary misy ny sasany izay atahorana mihitsy. Inona no azontsika atao raha mitranga izany?
1 Inona no atao hoe mandoa?
1.1 Ahoana no ahafantarako raha maloiloy ny saka?
2 Rahoviana no TSY tokony hanao mandoa saka?
3 Rahoviana no handoa saka?
3.1 Ahoana ny fomba handoavana ny saka?
4 Zavamaniry misy poizina amin'ny saka
4.1 Ao anaty zavamaniry
Inona no atao hoe mandoa?
Voalohany indrindra, heveriko fa zava-dehibe ny fahafantarantsika ny atao hoe mandoa sy ny antony tokony handehanantsika any amin'ny mpitsabo biby. Ny fandoavana dia ny fandroahana ny ao anaty vavony ao am-bava. Hanana maloiloy, retching ary hanao ezaka amin'ny kibo ianao mba hahafahanao mamoaka ny atin'ny vavony lehibe kokoa.
Rehefa misy fisalasalana, ny azy dia ny fiantsoanao ny ivon-toeran'ny veterinary matetika alehanao. Lazao azy ny tranga mba hahitany ny fahamatoran'ilay toe-javatra.
Eto ampiarahiko ny sasany toe-javatra izay tokony hitondranao ny saka any amin'ny tobin'ny veterinera raha mandoa ianao:
Amin'ny kittens latsaky ny herintaona.
Raha miahiahy ianao fa mihinana zava-mahadomelina olombelona na zava-mahadomelina (poizina sifotra, rodentisida sns)
Raha ahiahiana fa vatana avy any ivelany no nohanina, toy ny tady, kofehy, fanjaitra sns.
Raha mandoa matetika ianao na maharitra ny mandoa.
Raha ao anaty loany dia ahitantsika atiny misy dikany, ra na zavatra mitovy amin'ny "café".
Raha mandritra ny andro dia mandoa mihoatra ny in-2-3 ianao.
Ahoana no ahafantarako raha maloiloy ny saka?
Ny namantsika dia manana fomba faran'izay madiodio hanehoana fisalasalana. Ho famantarana voalohany afaka mihinana ve izy ireo?. Amin'ny fotoana hafa dia hanana toy ny a fanondrahana rano kely ary ny sitrapo fihetsehana amin'ny lela, toy ny milelaka ny sisa tavela amin'ny sakafo avy amin'ny vavany.
Ny filamatra dia, mazava ho azy, ny mankany amin'ny mpitsabo biby, fa raha lavitra ny toeram-pitsaboana isika dia zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hanaovana mandoa saka ary rehefa tsy hamporisika handoa.
Fa maninona no mandoa ny saka?
Rahoviana no TSY tokony hanao mandoa saka?
Na ratsy toy inona aza ny fahitantsika azy dia tsy mila mitaona mandoa isika na amin'ny toe-javatra toy inona raha nitelina klôro ianao, lasantsy, na vokatra ampiasaina hitehirizana ny fiara na hanadiovana ny trano. Izany hoe, ny vokatra rehetra manimba. Ny antony dia noho ny fihinanana azy io dia efa niteraka fahasimbana ilay biby ary raha mandroroka isika, dia manatsara ny fahasimban'ny esofagus rehefa miraikitra amin'ilay ranony misy asidra ao amin'ny vavony ny tsiranoka. Zava-dehibe ny miantoka fa tsy misy sisa tavela amin'ny tany.
Ankoatra izany, Raha adiny roa mahery no lasa hatramin'ny natelin'ilay biby ny vokatra misy poizina na ilay zavatra avy any ivelany dia tsy azo atao ny mandoa. Izany dia satria afaka adiny roa dia hiparitaka ao amin'ny tsinay kely izany ary raha misy zavatra misy poizina dia misy ampahany ihany no hositraniny. Amin'ity tranga ity dia maika sy zava-dehibe ny fandehananao any amin'ny tobin'ny veterinera akaiky anao indrindra.
Azo omena arina areti-maso mba tsy hahafaoka azy io. Ny karbaona mihetsika dia hita ao amin'ny fivarotam-panafody rehetra raha tsy mila fisoratana anarana mialoha ny fitsaboana ny biby. Hampiasa takelaka 4-5 eo ho eo amin'ny karbaona ampandehanana notampohan-drano kely izahay, ho an'ny saka tokony ho 3-4 kg.
Tranga iray hafa izay tsy azo hanaovana mandoa ny saka dia raha tsy mahatsiaro tena ilay biby satria atahorana ho sempotra noho ny hetahetam-po.
Ny asphyxia noho ny faniriana dia miorina amin'ny zava-misy fa rehefa tsy mahatsiaro tena ilay biby na manana zavatra manakana ny lalan-drivotra ary ny votoatin'ny gastric dia afaka miampita amin'ny havokavoka satria mihidy ny epiglottis na tsy manidy ny andalana.
Rahoviana no handoa saka?
Tsy izay rehetra lanin'ny namantsika tongotra efatra no mampidi-doza azy mivantana. Saingy tsy maintsy manara-maso azy isika raha mieritreritra isika fa nihinana zavatra tsy tokony ho azy. Mitandrema manokana amin'ny mpanadio rivotra any an-tranoImbetsaka isika no misafidy fofona mamy izay "manaitaitra" azy ireo. Zavamaniry na zavamaniry izay notsaboina tamin'ny herisida.
Ahoana ny fomba handoavana ny saka?
Mazava ho azy, Handrotsaka ny fandoavana raha miteny amintsika ny mpitsabo.
Ao an-trano dia azontsika atao ny mitarika fandoavana amin'ny hidrozenina peroxyde amin'ny fahadiovana 3%. Homena peroxyde hidrôzenina 5% 3ml ianao, izay kafe ny eran'ny sotrokely. Ao an-trano dia tsy hanome bebe kokoa isika satria mety hanimba ny biby ny tsy fananana fiofanana na fitaovana ampy. Zava-dehibe ny aorian'ny fanomezana ny diloilo hydrogen peroxyde dia ataontsika mandeha ilay biby mba hahomby kokoa.
Raha vantany vao nandoa ilay saka dia arina arina amin'ireo fatra voalaza tetsy ambony amin'ity lahatsoratra ity ny arina mihetsika.
Iray amin'ireo toe-javatra lehibe ieritreretantsika ny fomba fanaovana vavony saka satria dia nihinana ny zavamaniry sasany izay an-trano isika. Manaraka izany, avelako ho anao ny lisitr'ireo zavamaniry izay anananay any an-trano sy any an-tsahanay ary misy poizina ho an'ny saka.
Zavamaniry misy poizina amin'ny saka
Raha raisinao ireo zava-maniry ireo dia ho voatahiryo ny sakao ary afaka misoroka anao tsy handoa ny saka ianao.
Ao anaty zavamaniry
Zavamaniry menaka Castor (Ricinus)
Cherry krismasy (Solanum)
Cyclamen na violet persiana
Devoly ivy, Poto (Epipremmun aereum)
Ornithogalum (avy amin'ny fianakaviana hyacinth)
Poinsenttia na poinsettia (Euphorbia)
Abrus precatorius na licorice amerikana
Aesculus (Chestnut amin'ny soavaly na Chestnut diso)
Agrostemma githago (candelaria na carnation)
Allium sp. (tongolo, boka, tongolo lay)
Juniperus sabina (mikotroka juniper)
Alstroemeria (lilia any Peroa)
Anemone (ala anemone)
Lantana (saina Espaniola)
Trompetran'ny anjely (Brugmansia)
Hazo apricot (Prunus armeniaca)
Lily amin'ny lohasaha (Convallaria majalis)
Arisaema (lilia cobra)
Arum (POISONOUS BE)
Lupinus (lupine na lupine)
Lycopersicon (ovy, voatabia)
Vorona na voninkazo paradisa (Strelitzia)
Lysichiton (laisoa skunk)
Susana maso mainty (Thunbergia)
Dianthus (Tagetes, tantaran'i Moor)
Melia (Fianakaviana Mahogany)
Mirabilis jalapa (Don Diego amin'ny alina)
Brugmansia (Trompetran'ny anjely)
Bush Burning (Dictamnus)
Hazo ôka na holm (Quercus)
Centaurea cyanus (voninkazo na blueberry)
Cestrum (mahery amin'ny alina)
Colchicum (crocus fararano na safrona)
Convallaria majalis (lily amin'ny lohasaha)
Fetibe mainty (Agrostemma githago)
Prunus armenica (hazo apricot)
Cotoneaster (mitovy amin'ny tsilo afo)
Prunus laurocerasus (serizy laurel)
Cupressocyparis leylandii (Cypress any Leyland)
Robinia (akasia sandoka)
Dicentra (fo mandeha rà)
Fambolena fingotra (ficus)
Dictamnus (ahitra Gipsy)
Digitalis (digitalis na foxglove)
Schefflera (hazo elo)
Don Diego amin'ny alina
Tombo-kasen'i Solomon (Polygonatum)
Frangula na hazelnut (Rhamnus)
Strelitzia (vorona na voninkazo paradisa)
Ahidratsy hog goavam-be
Gloriosa superba (saina Espaniola)
Helleborus (voninkazo krismasy, hellebore maintso)
Tuhja (anao, kypreso)
Thunbergia (maso mainty)
Heracleum mantegazzianum (persily goavambe)
Chestnut soavaly (Aesculus)
Visum (mistletoe fotsy)
Manantena aho fa tianao ity lahatsoratra ity ary manampy anao izy io. Ary tadidio fa ity lahatsoratra ity dia lahatsoratra mampahalala, fa ny tena afaka manampy ny saka anao dia ny mpitsabo biby, ka raha manana fanontaniana ianao dia mankanesa any amin'ny ivon-toeram-pitsaboana azo antoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Cheats » Ahoana no fomba handoavana saka
Tsiambaratelon'ny sofina saka
Ny saka tricolor